Taliyeyaasha AMISOM oo ka walaacsan diyaargaroowga ciidamada Soomaaliya - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaTaliyeyaasha AMISOM oo ka walaacsan diyaargaroowga ciidamada Soomaaliya
Brig Paul L’Okech, taliyaha ciidamada Uganda ee Soomaaliya. [Xigashada Sawirka: The Observer]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Taliyeyaasha howlgalka milatariga Afrika ee AMISOM ayaa ka walaacsan diyaargaroowga ciidamada Soomaaliya marka ay baxaan.
“SNA waa kuwo si fiican u tababaran laakiin aan si wanaagsan u diyaarsaneyn in ay la wareegaan ammaanka,” ayuu yiri Brig Paul L’Okech, oo ah taliyaha ciidamada Uganda ee Soomaaliya.
“Inaan helno dagaalyahanno waa fududahay laakiin sidee baad u ilaalineysaa? Soomaaliya muddo dheer ma aysan lahayn ciidan, waxaan isku dayaynaa in aan dhisno hal laakiin waxaan u baahanahay inaan dadaal badan ku bixino tababarka, dib u habeynta iyo diyaarinta, “Ayuu yiri L’Okech.
AMISOM ayaa hoos u dhigtay tirada ciidamadeeda ku sugan Soomaaliya sanadkii lasoo dhaafay, waxaa laga dhigay 21,000 halka awal ay ahaayeen 22,000.
Dal walba oo ku deeqay ciidamada ayaa hoos u dhigay 250 kamid ah ciidankooda katirsan AMISOM, sida uu sheegay Kornayl Richard Omwega, oo ah afhayeenka AMISOM.
Sida uu yahay qorshaha bixitaanka, 1,000 askari oo kale oo katirsan AMISOM ayaa ka tagi doona Soomaaliya bisha Oktoobar ee sanadkan.
AMISOM waxaa sameeyay golaha ammaanka iyo nabadda ee Midowga Afrika bishii Jannaayo ee sanadkii 2007, iyada oo ujeedadu ahayd in ay taageeraan dowladda federaalka Soomaaliya, ayna tababaraan ciidamada Soomaaliya.
August 2, 2016 askar kamid ciidamada Midowga Afrika ee jooga Soomaaliya oo lagu xukumay hal sanno kadib markii lagu helay in ay iibsadeen qalab militari
December 19, 2017 Mareykanka oo sheegay in sideed maleeshiyo Al-Shabaab ah ay ku dileen duqeyn diyaaradeed oo ka dhacday meel u dhow Kismaayo
Somali football returns to African continental club competition for the first time in 29 years this weekend, Mogadishu City Club compete in the second string Confederation Cup against Zanzibar’s Malindi in the first round, first [...]